मखुन्डो कारखाना- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
जीवनको उद्‍गम नै यौनबाट हुन्छ भने यौनलाई गलत भन्ने कुचेष्टा म कदापि गर्न सक्दिनँ । यो घर्षण नै रहेछ– जसले जीवन अघि बढाइरहेको छ । यौन गलत हुनै सक्दैन । त्यसैगरी यौनको चाहना पनि गलत हुन सक्दैन । तर, प्राकृतिक यौन चाहनामा जब अस्वाभाविक आकांक्षाको जग बस्न थाल्छ, तब कुण्ठाको घर ठडिन थाल्छ । म त्यो घरमा आगो झोस्न चाहन्छु ।
माघ २४, २०७७ शिक्षा रिसाल
माफ गर्नुहोला ! यो मैले देखेको समाजको एउटा ऐना मात्र हो । त्यो ऐना, जहाँ म हरेक अनुहारमा दाग देख्छु । हुन सक्छ— ऐना होइन, मेरै आँखा धमिला होऊन् ।
तपाईं पनि एकपटक त्यो ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नुस् त ! १ देखि १० को स्केलमा तपाईं कुण्ठामा कहाँ पर्नुहुन्छ ? तपाईंमा यौनकुण्ठा कति छ ?
जीवनको उद्गम नै यौनबाट हुन्छ भने यौनलाई गलत भन्ने कुचेष्टा म कदापि गर्न सक्दिनँ । यो घर्षण नै रहेछ– जसले जीवन अघि बढाइरहेको छ । यौन गलत हुनै सक्दैन । त्यसैगरी यौनको चाहना पनि गलत हुन सक्दैन । तर, प्राकृतिक यौन चाहनामा जब अस्वाभाविक आकांक्षाको जग बस्न थाल्छ, तब कुण्ठाको घर ठडिन थाल्छ । म त्यो घरमा आगो झोस्न चाहन्छु ।
चाहना र कुण्ठा फरक कुरा हुन् । चाहना दिन हो, कुण्ठा रात ! कुण्ठा त्यो विष हो, जसले आफूसँगै अरूलाई पनि विषाक्त बनाउँछ ।
साँच्चि तपाईंले अहिलेसम्म कति जनासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नुभयो ? कतिलाई चुम्बनसम्म गर्नुभयो ? कतिको वक्षस्थलसम्म हात लैजानुभयो ? एक जवान हँसिली केटी देख्दा तपाईंलाई के हुन्छ ? उसका शरीरहरू छोएको कल्पना आउँछ ? तपाईंले अहिलेसम्म मनमनै कति जनासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नुभयो ? कोही बाँकी छन् ? फेसबुक र टिकटक हेर्दै आफ्ना अंगहरू त चलाउनुहुन्न नि ? यी प्रश्नका उत्तर अरूलाई भन्नु पर्दैन, आफैंसँग राख्नुस् !
मलाई केही साथीले सम्झाउँछन्, ‘हेर मानिसहरू त्यति खराब पनि छैनन् । जेमा पनि समस्या देख्ने बानी ठीक हैन । एक्सप्लोर गर् । जिन्दगीको मजा ले ।’
तर, म जति जति केटाहरूको मनोविज्ञान बुझ्दै जान्छु, यो दुनियाँ उति नै धेरै घीनलाग्दो र उच्चाटपूर्ण लाग्न थाल्छ । अनि सम्बन्ध, प्रेम, माया भन्ने भावनाबाट त्यसै त्यसै विश्वास उठ्दै जान्छ । मेरो यत्तिका वर्षको अनुभवबाट एउटा निष्कर्ष निकालेकी छु । दुनियाँका बहुसंख्यक मानिसहरू मूलतः दुई कुराका लागि मरिरहेका छन्– एक पैसा, अर्को यौन !
म सोच्छु– के पुरुष सधैं महिलामाथि शक्ति चाहन्छ ? के कसैको शरीरमाथि हक जमाउन पाउँदा उसको पुरुष दम्भ पूरा हुन्छ ? उसले आफूलाई किन शक्तिशाली सोच्छ ? महिलामाथि पूर्ण रूपमा आफ्नो अधिकार छ भन्ने उसको मस्तिष्कमा किन गडेर बसेको छ ? कि म गलत सोच्छु ?
अहिले विश्वव्यापी रूपमा चलिआएको ‘मी टु’ अभियानमा आदर्श फ्याँक्ने पुरुषहरूले कति महिलालाई आफ्नो पासोमा पारेका छन्, यो उनीहरूलाई नै थाहा होला । यहाँ मखुन्डोको कारखाना छ ।
म ६–७ वर्षकी थिएँ सायद । घरको मझेरीसँगैको कोठामा एक युवक बस्थ्यो । उसले मलाई धेरैपटक अजीव नजरले हेर्थ्यो । मलाई चकलेट दिन्छु भनेर आफ्नो कोठामा बोलाउँथ्यो । म पनि चकलेट र चाउचाउको लोभले उसको कोठातिर सोझिन्थेँ । उसले हतार–हतार ढोका बन्द गर्थ्यो । घरी–घरी हात शरीरका अनेक भागमा लगेर मुसार्न खोज्थ्यो । अनि भन्थ्यो, ‘मैले तिमीलाई माया गरेको है !’ म निस्सासिन्थें ।
यस्ता कुराहरू सानी बालिकालाई थाहा हुने कुरा थिएन, तर पनि उसको आत्माले थाहा पाउँथ्यो– यो गलत हो ।
‘नगर्नू यस्तो’ भन्दै म कोठाबाट निस्किन्थें । दौडिएर आफ्नो कोठामा जान्थें । मलाई कति रात निद्रा पर्दैनथ्यो । यस्तो घटना धेरैपटक दोहोरियो । त्यसो गरिरहँदा कसैले देख्ला कि भनेर ऊ होसियार हुन्थ्यो । म उसको अनुहारको भाव बुझ्थें । पछि बिस्तारै बुझ्न थालेँ– त्यो यौनपिपासु रहेछ । मैले कसैलाई भन्न पनि सकिनँ ।
कोपिलाजस्ता कोमल बालिकाहरूमाथि यस्तो दुर्व्यवहार हुँदा त्यसले जिन्दगीभर आघात र ‘ट्रमा’ छोडेर जाँदोरहेछ । कतिपय कोपिलाहरू फूल बन्न नपाउँदै ओइलाएर मर्ने रहेछन् । चर्को घाम र अप्ठेरो मौसम सहेर पनि फुल्न आँट गर्ने केही फूलहरू भने सधैँ त्रासमा बाँच्ने रहेछन् ।
एक दिन त्यो मान्छे यत्तिकै बिलायो । भाग्यो या कोठा छोडेर गयो, मैले चासो दिइनँ । अहिले त्यो मान्छे इतिहास भइसक्यो । तर, आज पनि त्यो ट्रमाले मलाई छोडेको छैन ।
वर्षौंपछि मेरो पहिलो प्रेमीले मलाई पहिलोपटक छुन खोज्दा म झसंग भएकी थिएँ । कताकता उसमा पनि मैले त्यही यौनपिपासु देखें ।
प्रेममा छुनु, स्पर्श गर्नु आवश्यक हो । स्पर्श एउटा पुल हो दुई प्रेमीबीचको । तर, यो स्पर्श थाहै नहुने गरी ‘निमोठ्याइ’ मा परिणत भइसकेको हुन्छ ।
प्रेम सम्बन्धमा रहँदा कसैको आँखामा पनि आफ्ना लागि प्रेम देखिनँ मैले । प्यास मात्र देखें, जुन मलाई छुन पाएपछि मेटिन्थ्यो । जसले हेर्थ्यो, उसको ध्येय त्यही हुन्थ्यो । मलाई छुन मात्र चाहनेहरूसँग मेरा आँखाहरू प्रश्न गर्थे, ‘अनि प्रेम कता छ ?’ सायद त्यसैले म कहिल्यै पनि कुनै सम्बन्धमा लामो समय टिक्न सकिनँ ।
मेरा उमेरका महिलाले आफ्नो बालापनमा भोगेको हुनुपर्छ । मेरो एक जना मिल्ने साथीले नै धेरै वर्षपछि आफ्नो मन खोलेर भनी । बच्चा बेलामा भाँडाकुटी खेल्दा बा–आमा बनेर खेल्थ्यौं । बा–आमा, परिवार भएपछि राति सुत्नुपर्ने बेला पनि आउने । अनि अलि ठूला केटाहरूले चर्तिकला देखाउने ! यौन चाहना मेट्न खोज्ने अनि भन्ने ‘यो त खेल हो ।’ त्यतिबेला हामीलाई किन केही थाहा भएन ? मेरी साथी सायद ७–८ वर्षकी हुनुपर्छ, केटा १२ वर्षको । ऊ त्यतिबेला परालको कुन्युमा बलात्कृत भइरहेकी थिई । तर, उसलाई त्यसबारे केही थाहा थिएन ।
कोरोनाअघि मैले केही ठाउँ घुम्न पाएँ । यात्रा गर्दा जहाँ पनि यस्तै कुण्ठित नजरहरूबाट आफूलाई बचाउन मुस्किल पर्छ । यो संसारमा महिला किन मन खोलेर ढुक्कले एक्लै हिँड्न पाउँदैनन् ? किन डराई–डराई निहुरेर हिँड्छन् ? किन कोही न कोही पुरुष उसको साथमा हुनुपर्छ ?
कुण्ठा ‘ध्रुवीय’ कुरा हो । र, यस्ता अनुभवहरू मैले देशभित्र र बाहिर सबैतिर भोगेकी छु । देश फरक होस्, जाति फरक होस्– कुण्ठा समान हुने रहेछ ।
सन् २०१९ मा मलेसियामा भेट भएका इरानी केटी देखेर म चकित परेकी थिएँ । मलाई लागेको थियो– सायद संसारका सबैभन्दा राम्रा केटी इरानका हुन्छन् । उनीहरू दाइ र बहिनी थिए । एक छिन कुरा गरिरहँदा त्यो इरानी केटाले मलाई घुरेको घुर्‍यै थियो । मलाई घरीघरी कर्के नजरले हेर्थ्यो । उसकी बहिनीसँग मेरो फोटो खिचिदिन्थ्यो ।
इरानी केटाले मलाई ‘फोटो पठाइदिन्छु’ भन्दै नम्बर माग्यो । मैले इन्स्टाग्राम आईडी दिएँ । ऊ चाहन्थ्यो– म उनीहरूसँग घुमौं, उसकै परिवारसँग । मैले मेरा अरू नै योजना भएको बताएँ । उसले आफ्नो अपार्टमेन्टमा लन्च गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि राख्यो । तर, म एक भियतनामकी केटी ब्याम्बोसँग बटु केभमा घुमिरहेकी थिएँ । हुन त ब्याम्बोलाई पनि यात्राकै क्रममा भेटेकी थिएँ, तर उसलाई देखेर केटाले सोध्यो, ‘तिमीहरू लेस्बियन हो ? ऊ तिम्री गर्लफ्रेन्ड हो ?’
केटोले मसँग समय बिताउन हरसम्भव प्रयास गर्‍यो । भन्दै गयो– ऊ फिलिपिन्समा बस्छ, सफ्टवेयर इन्जिनियर हो । फ्यामिली ट्रिपमा मलेसिया आएको हो । ऊ मसँग रात बिताउन चाहन्थ्यो । आफ्ना कुण्ठा मेटाउन चाहन्थ्यो ।
यसको साक्षी थिई ब्याम्बो । उसले मेरो कानमा आएर खितखिताउँदै भनी, ‘ऊ तँसँग वान नाइट स्ट्यान्ड चाहन्छ । मान्छे त राम्रै छ । तेरो विचार के छ ? विथ स्ट्रेन्जर इन स्ट्रेन्ज सिटी ।’उसलाई मैले हप्काएँ ।
त्यतिबेला दिमागमा आयो– के पुरुषहरू चौबीसै घण्टा कुण्ठित हुन्छन् ? यो यौन चाहना किन यति धेरै हुन्छ ? के हरेक स्त्रीलाई उनीहरू त्यही नजरले हेर्छन् ? के यौन नै उनीहरूको स्वर्गद्वार हो ? के स्तनहरू उनीहरूका लागि पुरुष दम्भको प्रमाण हो ?
मलाई घुम्दा रमाइलो लाग्छ । तर, एक्लै यात्रा गर्दा जहाँको भए पनि एकदम सतर्क हुनुपर्ने रहेछ । मानसिक रूपमा एकदम बलियो हुनुपर्छ । एक्लै यात्रा गर्दा केही समस्या आइपर्‍यो भने आत्तिने विकल्प हुँदैन । सबै कुरा आफैंले सामना गर्नुपर्छ । आफैं जुध्नुपर्छ ।
ब्याम्बोले ड्राइभरसँगको भ्वाइस रेकर्ड सुनाउँदै भनी, ‘एक दिनअघि मात्र मलेसियामा ट्याक्सी ड्राइभरले मलाई एक्लै देखेर मेरो रेट सोध्यो । आफूसँगै रात बिताउन आग्रह गर्‍यो । मैले नो थ्यांक्स भनें ।’
केही समयअघि लबिम मलमा फिल्म हेर्न जाँदा मलाई देखेको एक जना केटाले बाटोमा पिछा नै गरेर फोन नम्बर माग्यो । जसले फोन नम्बर माग्दा पनि इन्स्टाग्राम आईडी थमाउने मेरो बानी अचम्मको छ । उसले मलाई म्यासेज गरिरहन्थ्यो । कहिलेकाहीँ म रिप्लाई गरिदिन्थें । एकपटक उसले म्यासेजमा लेख्यो, ‘मेरो केही महिनामा बिहे हुँदै छ । मलाई तिमी एकदम मन पर्‍यो । म जिन्दगी बाँच्न चाहन्छु । क्यान वी डेट ? लाइक नो स्ट्रिंग्स अट्याच्ड ?’ उसको प्रस्ताव गज्जबकै हो । तर, जिन्दगी करण जोहर र इम्तियाज अलीको फिल्म होइन भन्ने उसले बुझेनछ ।
‘नो स्ट्रिंग्स अट्याच्ड’ अर्थात् डेट, शारीरिक सम्बन्ध तर नो भावनात्मक सम्बन्ध ।
कहाँ छ अहिले भावनात्मक सम्बन्ध ? मलाई हातले लेखेको प्रेमपत्र मन पर्छ तर दुनियाँ अहिले सेक्स च्याटमा रमाउँछ । यस्तो लाग्छ— अहिले विश्वभरबाटै भावनात्मक सम्बन्धको महत्त्व घट्दै गएको छ । अहिले भावनात्मक सम्बन्धको कुरा गर्नेहरूलाई देखेर मान्छे हाँस्छन् अनि भन्छन्, ‘ह्वाट एन इमोसनल फुल ।’
हो हामी फुल हौं ।
के एउटा शरीरलाई अर्को शरीर भए पुग्छ ? यो कुराले मेरो दिमाग तिलमिलाउँछ ।
यौन कुण्ठित ‘गिद्धे’ आँखाहरू अहिले दोब्बर तेब्बर भएका छन् । पहिला लुकीलुकी परालको कुन्यूभित्र कुण्ठा पोखिन्थे भने अहिले खुलेआम छन् । एक विदेशी साथीले ‘नेपाल केटी मान्छेका लागि सुरक्षित छ है ?’ भन्दा म मनमनै हाँसेकी थिएँ ।
यो कुण्ठित स्पर्शको खोजीमा पुरुषहरू के–केसम्म गर्दैनन् ! केही कुरा सिकाउने बहानामा गालानजिक ल्याउने होस् कि कुइना वा हात वक्षस्थलसम्म पुर्‍याउने चेष्टा ! गाडीमा भीडको बहाना गर्दै आफ्नो गोप्य स्थलमा घर्षण गराउने चाहना ! कुण्ठा भकभकी उम्लिएको पानीजस्तो न हो ! यसले फ्रस्ट्रेसन अनि हिंसा निम्त्याउँछ । जाबो एउटा स्खलनका लागि ‘जिन्दगीभर साथ दिन्छु । तिम्रो धेरै माया लाग्छ’ भन्नेजस्तो अर्थहीन तर्क दिन पनि पछि पर्दैनन् ।
नारीलाई जन्मेदेखि नमर्दासम्म कुण्ठित आँखाको नजरबाट बच्न असम्भव छ । तीरैतीरको प्रहारबाट बच्न मुस्किल छ । यस्तो लाग्छ— युद्धको माइन्डफिल्ड हो स्त्रीको जीवन । शिशुदेखि वृद्धसम्म बलात्कृत भएका घटना सबैले सुनेकै छौं । विद्यालयमा शिक्षकले दाह्रीले गाला घोचेका हामीले देखेकै छौं । होमवर्क नबुझाउँदा ढाडमा कुट्ने निहुँमा जताततै छुने शिक्षक चिनेकै छौं । विक्षिप्त भएर एक महिला रोइरहँदा हात समाएर कपाल मुसार्दै सहानुभूति दिने बहानामा चुम्बन गर्न ओठ तेर्स्याउनेहरू पनि देखेकै छौं । कोही महिलालाई प्यानिक अट्याक आउँदा बोकेर अस्पताल लैजाने निहुँमा जताजतै हात निमोठ्नेहरू पनि कतिपयले भोगेकै छौं ।
अर्को एउटा पुरुष साथीले एक दिन खुलेरै भन्यो, ‘यो यौनचाह अद्भुत हुने रहेछ । यसको प्यास कहिल्यै मेटिँदैन । तृप्ति कहिल्यै सकिँदैन । मैले थुप्रैसँग यौनसम्पर्क राखेको छु तर पनि हरेक दिन उठ्नासाथ ममा नयाँ प्यास जन्मिसकेको हुन्छ, जुन मेटाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले पुरुष अनेक विकल्पहरू खोजेर आफ्नो चाहना पूरा गर्नतिर लाग्छ । हस्तमैथुन, गाडीमा र अफिसमा ‘टच’, सेक्स च्याट, यौनकल्पना आदि । म पनि एउटा कुण्ठित मानिस हुँ । तर, मैले कसैलाई दुर्व्यवहार गरेको छैन । त्यस्तो गर्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । झन् खुलेरै विरोध गर्छु । बरु म कुण्ठामा घुट्घुटिएर मर्छु तर कसैलाई जीवनभरलाई ट्रमा दिन सक्दिनँ ।’
उसका यी कुराहरू मैले थोपै पत्याइनँ । मलाई पुरुषहरू देखेर दया लाग्छ । उनीहरू आफ्नै ‘हर्मोन’ को सिकार भएका दयालाग्दा प्राणी हुन् । आफ्नो शरीरलाई जित्न नसक्नेहरूको आत्मसम्मान झन् कति कमजोर होला ?
एकपल्ट चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोतासँग मेरो कुरा हुन पायो । म त्यतिबेला ब्याचलर्स पढ्थें । मलाई सबै जना एकदमै ठूला लाग्थे । केहीबेरको कुराकानीमै उनले भनिहाले, ‘यु आर हट । ह्वाट डु यु थिंक अबाउट सेक्स ? यौनका बारे तपाईंको के धारणा छ ?’
‘म यो विषयमा कुरा गर्न चाहन्नँ,’ मैले भनेकी थिएँ ।
उनले तत्काल जवाफ फर्काए, ‘अहिलेको युवा भएर पनि कस्तो कन्जरभेटिभ ?’
मलाई थाहा छैन यो संसार धेरै अघि बढेको हो वा म पछि परेकी हुँ ! केही बोलें भने फरवार्ड, यौनका बारेमा कुरा नगरे पुरातन ?
म उनीसँग त्यसपछि बोलिनँ । त्यो संवाद त्यहीँ हरायो । उनको कार्यक्रम आजभोलि पनि आइरहेकै हुन्छ । उनी आदर्श फ्याँकिरहेका हुन्छन् । तर, मेरा लागि उनी यौन बासनालिप्त एक पुरुष मात्र हुन् ।
के एउटा मान्छे र अर्को मान्छे मानिस–मानिस भएर संवाद गर्न सक्दैनन् ? किन उनीहरू मन जित्न चाहँदैनन् ? किन उनीहरूको मायाको यात्रा पेन्टको जिपभित्र गएर सकिन्छ ? आज प्रेम फ्रेमभित्र कतै हरायो । मन र मन जोडिनुको सट्टा जननेन्द्रिय मात्र जोडिइन्छन् । पहिले आँखाहरू आँखामा गएर ठोक्किन्थे, अहिले तिनै आँखा वक्षस्थल र नितम्बमा गएर ठोकिन्छन् । लामा–लामा प्रेमपत्रहरू अहिले ‘सेक्स च्याट’ मा परिणत भएका छन् ।
गीतका शब्दहरू पठाएर ‘डेडिकेट’ गर्नेहरू अहिले ‘न्युड्स’ को खोजीमा व्याकुल देखिन्छन् । शब्दहरूको ओज घटेको छ । माया पिरतीका सुन्दर भावहरू धमिलिएका छन् । प्रेम र बासनामा बासनाको जित भएको छ । शारीरिक सम्बन्धले भावनात्मक सम्बन्धलाई धेरै पछि छाडिसकेको छ ।
मलाई लाग्छ— लगभग ८५ प्रतिशत जोडीहरू एकआपसमा बफादार छैनन् । सबै ‘अफेयर’ मा झुमेका छन् । किनकि मसँग जिस्किन खोज्नेमध्ये ६० प्रतिशत पुरुष त विवाहित नै छन् ।
(यो कुनै सर्वेक्षणको नतिजा होइन । आवेग पोख्दा फुटनोटमा सर्वेक्षणको तथ्यांक राखिँदैन ।)
‘एउटै तरकारी खाँदा–खाँदा वाक्क लागिहाल्छ नि !’
‘कहिलेकाहीँ दाल बदल्नुपर्छ !’
‘घरमा भैंसी छ भन्दैमा प्याकेटको दूध खान नमिल्ने हैन क्यार !’
‘नयाँ माल खान मन लाइरहेको छ यार !’
यस्ता कुराहरू सुन्नमा आइरहन्छन् । पुरुषहरूका लागि महिला तरकारी हुन्, दाल हुन्, भैंसी हुन् । हुन त यो मामिलामा महिलाहरू पनि अछुतो छैनन् । परपुरुषसँगको अफेयरमा झुम्ने धेरै महिला देखेकी छु ।
उनीहरू भन्छन्, ‘लोग्ने मान्छे मात्रै एक्स्ट्रा म्यारेटल अफेयरमा रमाउने, हामीले चाहिँ नहुने ?’
हो ! इट्स हर चोइस ।
वी लिभ इन अ सेक्स स्टारभिङ वर्ल्ड । यो संसार भोकमरीमा हराएका अफ्रिकी देशहरूजस्तै भएको छ । तर, भोक अन्नको होइन घर्षणको ।
भौतिक विज्ञान पढाउने सरले भन्थे, ‘घर्षणले ताप पैदा गर्छ । घर्षण नहुने भए हाम्रो दैनिक जीवन लथालिंग हुनेछ । सारा चीजहरू घर्षणको बलमा अडिएका छन् ।’
हो रहेछ । म बुझ्दै छु ।
सायद जीवविकासको क्रमले नै मानिसलाई यौन कुण्ठित बनाइरहेको छ । नयाँ पुस्ता झन्पछि झन् यौन आसक्त हुँदै गइरहेको छ । हरेक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई ‘कुण्ठित जिन’ छोड्दै गइरहेको छ । पृथ्वीबाट मानव प्रजाति लोप भयो भने यौनकुण्ठा प्रमुख कारण हुनेछ । यत्रो ४ बिलियन वर्षको यात्रा जाबो एउटा हर्मोनका कारण सकिँदा कति विडम्बना होला ?
मेरी एक बहिनीका साथीहरूले उसलाई सुनाउँछन् रे– उनीहरूका बोयफ्रेन्डले ‘न्युड्स पठाऊ’ भन्छन् रे !
‘पठाएनौ भने ब्रेक अप दिन्छु’ भन्ने धम्की त कतिपटक हो कतिपटक !
केटीहरू पनि आफ्नो नग्न तस्बिर पठाएर बोयफ्रेन्डको यौन कुण्ठा मेटाइरहन्छन् । हातहातमा स्मार्टफोन बोकेका नयाँ पुस्तालाई सुरक्षित यौनशिक्षाको बारेमा कसले सिकाउन सक्छ ? कसरी यौन कुण्ठारहित समाज बनाउन सकिन्छ ? यसको समाधान के हो ? उनीहरूलाई कसले सम्झाउने ?
अहिले कुण्ठा पोखिने माध्यम छ्यापछ्याप्ती छन् । ९० को दशकमा हिरोइन रम्भा र सलमान खानको ‘तेरे नैना मेरे नैनो से क्या भाषा बोले बोले’ गीतमा रम्भाका स्कर्टभित्रका तीघ्रा हेरेर हस्तमैथुन गर्नेहरू आज विभिन्न पोर्न साइटमा धरी रमाउन सक्दैनन् । अहिले १६–१७ वर्षे ठिटाठिटीहरूले शरीरको प्यास मेटाउनुलाई नै असली आनन्द बुझिरहेका छन् ।
केही वर्षअघि मलेसियामा हुँदा डोर्मको परिसरमा बसेर कफी पिइरहेकी थिएँ । एउटा ५०–५५ वर्ष जतिको भारतीय मान्छे आयो । कुर्सी तानेर बस्यो र आफ्नो परिचय दिन थाल्यो । उसको केरलामा हीराको व्यापार छ रे ! ऊ एक्लै घुम्न आएको हो रे ! श्रीमतीसँग त वाक्कै लागिसक्यो रे घुम्दाघुम्दा । मैले उसलाई हेरेँ मात्र, केही प्रतिक्रिया दिइनँ ।
‘मसँग लन्च खान जानुहुन्छ ?’ हात अघि सार्दै मलाई प्रस्ताव गर्न आयो, ‘अलि पर मेरो साथीको अपार्टमेन्ट छ । राम्रो छ ।’
‘म जाँदिनँ,’ मैले हात हटाएँ ।
‘कस्तो एटिटिउड हो ? मैले यत्रो समय मेरो आफ्नो बारेमा भनेर समय बर्बाद किन गरें त ? आई लाइक्ड यु ।’
म केही नबोली त्यहाँबाट उठेँ । ऊ मुर्मुरिँदै कता गयो, थाहा छैन ।
यसो सोचें– म किन डराएर भागें त्यहाँबाट ? मैले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि जानुपर्ने त ऊ थियो । न मैले उसलाई नाम सोधेकी थिएँ न ठेगाना । न बिजनेसमा मेरो चासो थियो । उसको गलत नजर मैले चिनिसकेकी थिएँ ।
हरेक मानिसमा केही न केही कुण्ठा हुन्छन् । म पनि कुण्ठैकुण्ठाले ग्रस्त छु । प्रश्नै प्रश्नले घेरिएकी छु । केही अचम्म, केही रिस उठ्दा, केही हाँसो लाग्ने, केही मरौँ मरौँ लाग्ने खालका प्रश्नले मेरो दिमागमा ताण्डव मच्चाइरहन्छन् । त्यसैले यस्ता कुरा पोखिइरहन्छन् ।
र, मलाई थाहा छ— यस्ता कुरा कहिल्यै सकिँदैनन् । किनभने प्रकृतिले यो कुण्ठा कहिल्यै नरित्तिने बनाइदिएको छ । परालको कुन्युमा, होलीमा रङ लगाउने बहानामा, बसमा, अफिसमा यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन् । मखुन्डोधारी हुँडारका गिद्धे नजरहरू डुलिरहन्छन् । उनीहरूका लागि पटक–पटक स्खलित हुनु नै जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति हो । निर्वाण हो । यिनीहरू हरेक पल यो निर्वाणको चाहनामा स्खलित हुन चाहन्छन् ।
प्रकाशित : माघ २४, २०७७ १०:४४
जरुर साथी म सिंगल
पहिलो शिक्षा घरबाट सुरु भएजस्तै हरेक पहिलो लडाइँ पनि घरबाटै सुरु हुन्छ । आफ्नै परिवारबाट उम्किएपछि बल्ल समाजसँगको घनघोर लडाइँ सुरु हुन्छ ।
कार्तिक २१, २०७७ शिक्षा रिसाल
‘तिमीलाई न त खाना पकाउन आउँछ, न घरको केही काम । तिमीलाई त जिरा र ज्वानो पनि छुट्याउन आउँदैन । न त घरको जिम्मेवारीबारे थाहा छ । तिमीलाई के लाग्छ— म तिमीसँग बिहे गर्छु ? सरी, मेरो परिवारलाई तिमीजस्तो बुहारी चाहिएको हैन ।’
दुई वर्षअघि मेरो कानमा बज्रिएपछि यी शब्द मेरो शरीर र आत्मा छाडेर अझै गएका छैनन् । यी एकमुष्ट शब्दको आशय यही हो— म घरको काम गर्ने मेसिन बन्न अक्षम छु ।
केही दिनअघि ‘कान्तिपुर’ मा लेखक सावित्री गौतमको ‘विखण्डनकारी महिलाको आँखामा दसैं’ शीर्षकमा लेख पढ्दा झलझली त्यो दिनले रन्थनायो । लेखका हरेक वाक्य, हरेक शब्दमा मैले आफूलाई पाएँ । हाम्रो समाजले केटी मान्छे भएपछि खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, कुचोकसेरो गर्ने, सबैको ख्याल राख्ने हुनैपर्छ भनेर तोकिदिएको छ ।
मलाई सम्झना आउँछ— हरेक चाडपर्वमा आमा र आन्टीको चटारो । पहिले जमानामा पुरुषलाई उनका आमाहरूले ‘छोराले घरको काम गर्दैनन्’ भनेर केही अह्राएनन् । उनीहरूले कहिल्यै गर्न पनि खोजेनन् । यो सिलसिला चल्दै गयो । आमा बिहे गरेर आउनुभयो । आन्टी बिहे गरेर आउनुभयो । बुहारी भएपछि उहाँहरूको जिम्मेवारी बढ्यो ।
दसैंमा हामी आमाका काकाकहाँ जान्थ्यौं । म हरेकपटक देख्थें— एक झुन्डमा लोग्नेमान्छेहरू तास खेलिरहेका हुन्थे । कतै गफ गरिरहेका हुन्थे । उनीहरूका श्रीमती भान्सामा मासुका परिकार पकाइरहेका देखिन्थे । पकाएर श्रीमान्हरूलाई टक्र्याउँथे ।
एक जना माइजू तासको खालमा गएर ‘म पनि खेल्छु’ भनेर बसिछन् । यो कुरा एक–दुई कान हुँदै मैदान पुग्यो । हरेक नातागोतामा आगोझैं फैलियो, ‘त्यो बुहारी कति सोमत नभएकी ! लाजसरम पचेकी ! लोग्नेमान्छेको बीचमा बसेर तास खेल्छु भनी ! उसको लोग्ने लाजले रातोपिरो भयो बिचरा ! बोल्नै सकेन !’
त्यतिबेला मलाई लाग्थ्यो— ती माइजूले त्यसो नगरेको भए पनि हुन्थ्यो ।
अहिले उहाँलाई सम्झेर गज्जब लाग्छ । एक मन मलाई उनीजस्तै हुन मन लाग्छ । अर्को मन भन्छ— कुल शिक्षा कुल ! यु डन्ट वान्ट दिस !
त्यतिबेला मलाई ‘महिलाले त्यसो गर्नु गलत हो’ भनेर बुझाइयो । तर, यो कुराको जड अहिले बुझ्दै छु । पहिलो शिक्षा घरबाट सुरु भएजस्तै हरेक पहिलो लडाइँ पनि घरबाटै सुरु हुन्छ । आफ्नै परिवारबाट उम्किएपछि बल्ल समाजसँगको घनघोर लडाइँ सुरु हुन्छ ।
छोरा र छोरी उही तरिकाले पेटमा ९ महिना हुर्किन्छन् । गर्भभित्र शारीरिक विकास पनि उस्तै गतिमा हुन्छ । जन्म पनि उही प्रक्रियाले हुन्छ । उस्तै यात्रामा यो धरती टेक्ने छोरा र छोरीको बाटो जन्मपछि भने अलग हुन्छ । छोरा र छोरीलाई फरक बाटोमा हिँडाइन्छ । छोराहरूलाई ‘छोरा मान्छेले अलिकति बिगार त गरिहाल्छन् नि’ भन्ने बाटोमा हिँडाइन्छ । छोरीहरूलाई ‘छोरी मान्छे भएर धेरै उफ्रिनु हुँदैन’ शीर्षकको बाटोमा डोर्‍याइन्छ । छोरा वंश धान्ने ‘परिवारको शान’ झैं हुर्काइन्छन् । छोरी ‘अर्काको घरमा जाने नासो’ को रूपमा हुर्काइन्छन् ।
छोरा साथीहरूसँग दिनभर खेल्न जाँदा छोरीहरूलाई ‘घरको काममा आमालाई सहयोग गर्ने’ कामदार बनाइन्छ । छोरालाई काम लगाउनुपरे ‘छोरा मान्छेले त परेपछि जे पनि गरिहाल्छ, किन काम लगाउनू ?’ भनिन्छ । छोरीलाई चाहिँ ‘बिहेपछि बूढोको घरमा काम नजाने बेइज्जत हुन्छ, गाल आमालाई पर्छ’ भनेर धम्क्याइन्छ ।
वास्तवमा छोरीहरूको बाल्यकाल यही तयारीमा बित्छ ताकि उनीहरू कुनै दिन हुर्केर लोग्नेको घरमा सेवा गर्न सकून् । बाल्यकालको अबोधपन र उत्सुकता पछ्याउने समयमा उनीहरूलाई घरको ‘ट्रेनिङ सेन्टर’ मा भर्ती गराइन्छ ।
म मान्छु— अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । छोरीहरू शिक्षित छन् । आत्मनिर्भर छन् । तर, भित्रसम्म फैलिएको असमानताको जरो अलिकति पनि हल्लिएको छैन । असमानताको जरोमा उभिएको पितृसत्ताको रूख झांगिएर झन् ठूलो भएको छ । यति ठूलो कि उसले वरपरका स–साना बिरुवाको घाम छेकेको छ । शिक्षा र चेतनाको घाम छेकिएपछि उम्रिने भनेको उही पुरातन समाज हो ।
म अविवाहित छु । समाजका अनुसार मेरो विवाह गर्ने उमेर पुगिसक्यो । मेरा साथीसंगी, दिदीबहिनी, भदै आदि सबैको बिहे भइसक्यो । सबै आ–आफ्नो फेसबुक वालमा ‘विथ माई हबी’ भनेर फोटो हाल्छन् । तीजमा राताम्मे भएर गरगहनाको फोटो राख्छन् । तर, त्यो झकिझकाउ सारीमा, त्यो पोतेमा कति आशा, इच्छा र आकांक्षा दबिएर बसेका होलान् ? म यस्तै प्रश्नको उत्तर खोजिरहन्छु ।
मलाई कहिलेकाहीँ उनीहरू चाहेर वा नचाहेर भन्छन्, ‘कति रमाइलो छ है तँलाई ?’
अनि कहिले ठ्याक्क उल्टो सुन्छु, ‘अब त सेटल हो न, एक न एकचोटि त बिहे गर्न परिहाल्छ ।’
कोही थप्छन्, ‘अहिले नै हो जे–जे गर्न मन लाग्छ गर्, बिहेपछि पाइँदैन ।’
यी मेरा नितान्त व्यक्तिगत भोगाइ हुन् । मलाई यही समाजको चालचलनका कारण विवाह र सम्बन्धप्रति ठूलो वितृष्णा छ । प्राकृतिक नियमअनुसार हामी आमा–बुबालाई आफ्नो इच्छाअनुसार फेर्न वा साट्न सक्दैनौं । तर, छोरीहरूलाई आफ्ना बुबा र आमा नै फेर्नुपर्छ । कोख फेर्न नपरे पनि आमाको काख फेर्नुपर्छ । आफू हुर्केको घर फेर्नुपर्छ । त्यो आँगन छोड्नुपर्छ, जहाँ आफ्नो अमूल्य बाल्यकाल बितेको छ । राम्रोसँग नचिनेकालाई बुबा–आमा मान्नुपर्छ । कहिल्यै नटेकेको घरलाई आफ्नो घर मान्नुपर्छ । बिरानो आँगनलाई आफ्नो मानेर अँगाल्नुपर्छ ।
तपाईं (सम्पूर्ण पुरुष) ले कहिल्यै सोच्नुभएको छ— तपाईंलाई यी सब गर्नुपरे के होला ? बिहे गरेर आफ्नो घर छोडेको, नयाँ घर गएको, नयाँ बुबा–आमा पाएको अवस्था एकपटक कल्पना गर्नुस् त ! एक दिन ससुरालीमा गएर दिनभर बस्नुपर्‍यो भने हरिबिजोग हुन्छ । कोही ज्वाइँ केही दिन ससुराली बसिहाले भने पनि यही समाजले भन्छ, ‘ज्वाइँ भएर नि के लाज नभएको, यति दिन बसेका !’
कोही ज्वाइँ धेरै नबोल्ने भए भलाद्मी, धेरै बोल्ने भए कति रसिला र रमाइला ! बुहारी धेरै नबोल्ने भए घुसघुसे, धेरै बोल्ने भए प्यारप्यारे !
कुरा यहीँ सकिँदैन । घरपछि आउँछ थर । समाजले ठूलै मन गरेर नामचाहिँ बदल्न लगाएको छैन । तर, केही उदाहरण हाम्रै टोलमा देखेकी छु— घरको नाम एउटा, माइतीको नाम अर्को ।
मेरो यो लेख यो समाज, केही दिदीबहिनीको सोच र आमाहरूको धारणासँग पनि पक्कै मिल्दैन, दाजुभाइसँग त परको कुरा । म ढुक्क छु । म छोरी भएर जन्मिएकी हुँ, बुहारी बनेर मर्न चाहन्नँ । मलाई आफ्नो गोत्र फेर्नु छैन ।
म बिहान जतिबेला मनलाग्यो, उतिबेला उठ्न सक्ने जीवन बाँच्न चाहन्छु । कोही उठ्नुअघि आफू उठेर सजिँदै हल्का मुस्कानसहित सबैसामु उपस्थित हुनुपर्ने बुहारी बन्न चाहन्नँ ।
मैले यही कुरा भन्दा धेरैले सुनाउँछन्, ‘चाँडै उठ्नु भनेको आफ्नो जीवनशैलीका लागि राम्रो हो । ढिलासम्म सुत्नु राम्रो होइन । मान्छे एउटा रुटिनअनुसार चल्नुपर्छ ।’
जीवनशैलीको ठेक्काचाहिँ बुहारीहरूको मात्रै हो क्यारे !
म घरभित्र मन लागेको बेला चिच्याएर हाँस्ने जीवन बाँच्न चाहन्छु । न कि खोक्दा पनि समाजले के भन्ला भनेर डराई–डराई बाँच्नुपर्ने बुहारी भएर । छोरी भएर जन्मेकी म बुहारी, भाउजू, माइजू, काकी, जेठानी बन्न कदापि चाहन्नँ । किनभने ती सम्बन्धसँग आउँछन् अनेकौं जिम्मेवारी । अनि ती जिम्मेवारीले चिच्याई–चिच्याई भन्छन्—
‘अब तँ अल्लारे छोरी होइन, कसैको घरकी बुहारी भइसकिस् । घरकी लक्ष्मी, घरकी शोभा होस्, गहना होस् ।’
‘त्यसरी पनि हाँस्ने, बोल्ने, हिँड्ने हो ? तँ त कसैको घरकी इज्जत भइसकिस् । तँ जिम्मेवार हुनुपर्छ, अरूका लागि ।’
मेरा दिदीबहिनी र म बच्चाबेला सँगै खेल्थ्यौं, हामी केहीमा फरक थिएनौं । तर, अहिले म उनीहरूको समाजमै पर्दिनँ । हाम्रो ‘सो–कल्ड’ राम्रो समाजका लागि म बिहे नभएकी, नगरेकी, घर–परिवार र श्रीमान् नभएकी, अल्लारे, हाउडे आदि हुँ ।
जब उनीहरू आफ्ना बालबच्चा लिएर आउँछन्, मेरी आमाको तनाव शिखरमा पुग्छ, ‘हेर् त ! तँभन्दा कान्छी !’
म आमालाई प्रतिप्रश्न गर्छु, ‘आमा ! यस्तो कुन घर छ, जहाँ म घरमा जस्तै जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला उठ्न सक्छु ? यस्तो घर, जहाँ मलाई अरूले के भन्लान् भन्ने कुराको ‘अलर्ट’ हुन नपरोस् ? यस्तो परिवार कहाँ छ, जसले मलाई बिहे गरेको भोलिपल्ट राताम्मे फरिया, सिन्दूर–पोते नभई सामान्य पजामा र टिसर्ट लगाएर बेडरुमबाट बाहिर निस्केको देख्न सकोस् ?’
यस्तै कुरा चल्दा एउटा साथीले भनेको थियो, ‘त्यस्तो फरिया गाह्रो भए कुर्ता लगाउँदा भइहाल्छ नि !’
म छक्क परें । पजामा र टिसर्ट लगाउँदा हुनेचाहिँ के हो ? ए अँ, बुहारीलाई सोबर हुनैपर्छ क्यारे ! नजर झुकाउनैपर्छ क्यारे !
बिहेको कुरा चल्दा म आमालाई बेलाबेला भन्छु, ‘यस्तो केटा खोज्नू, जसले बिहे गर्नेबित्तिकै आफ्नो घर–परिवार छोडोस् । उसले पनि आफ्नो गोत्र त्यागोस् । आमा–बुबाप्रति आफ्नो कर्तव्य सधैं हुन्छ तर यो समाजमा बिहे हुनेबित्तिकै छोरीलाई मात्र पराई किन बनाइन्छ ? छोरालाई पनि त बनाइयोस् । ती दुईलाई अलग्गै बाँच्न दिइयोस् । मलाई चाडपर्व, पूजा, तिथि, श्राद्धमा बिहान ४ बजेदेखि उठेर भान्सामा लदारिनु नपर्ने घर खोजिदिनुस् ।’
मेरो कुरा सुनेर आमा ‘यस्ता पागल कुरा नगर् है’ भनेर एक छिन रन्किनुहुन्छ । तर, फेरि सम्झाउन थाल्नुहुन्छ, ‘हेर्, अरू पनि त यस्तै बिहे गरेर गए । घर सम्हालेर बसे । बच्चाबच्ची पाए । त्यो जिन्दगी फरक छ । एकचोटि त्यो जिन्दगीमा पुगेपछि त्यतै रमाइलो लाग्न थाल्छ । त्यसमा चुनौतीसँगसँगै खुसी पनि आउँछ । जिम्मेवारीसँगसँगै परिपक्व हुँदै गइन्छ । समझदारी दुवै परिवारलाई गर्नुपर्छ तर छोरी अलिकति लचिलो हुनुपर्छ ।’
म सोध्छु, ‘अनि यो लचिलो हुनुपर्ने बोध लोग्नेमान्छेलाई किन हुँदैन ?’
आमा एक सासमा भन्नुहुन्छ, ‘किनकि उनीहरू हामीलाई विश्वास गर्छन् । विश्वास गरेर आफ्नो घर–परिवारमा सामेल गराएका हुन्छन् ।’
आमा मलाई एकदम कुशल ‘बुहारी मटिरियल’ बनाउन चाहनुहुन्छ, जुन म हुँदै होइन र बन्न पनि सक्दिनँ ।
एकपटक एक जना भाउजूले मेरी आमाको चित्त दुखाइन् । मेरा यस्तै ‘पागल’ सर्तहरू सुनेपछि उनले आमासँग भनिछन्, ‘त्यसो भए कोही परिवार र खानदान नभएको, जात न थरको अनाथसँग बिहे गरे भइहाल्यो नि !’
त्यो बेलादेखि आमाको ईख तिखारिएको छ । तर, मेरा सर्त उस्तै छन् । आमा र हजुरआमा एकातिर, म एकातिर । हाम्रो जुहारी चलिरहन्छ ।
मलाई सबैले सधैं सोधिरहने प्रश्न यस्तै हुन्छ, ‘भोज कहिले खुवाउने ? अब बिहे गर्नु पर्दैन ? कहिलेसम्म हो यस्तो बैरागिएर बस्ने ?’
सबैलाई आज एकमुष्ट उत्तर दिन चाहन्छु, ‘न म बैरागिएर बसेकी छु, न कसैलाई भोज खुवाउने रहर नै छ । यस्तो संसारमा बिहे गरेर गृहिणी बन्नु मलाई स्वीकार्य छैन, जहाँ मेरो स्वतन्त्रताको रिमोट अरूको हातमा होओस् । जहाँ मैले फेर्ने हरेक श्वासको खबर दिनुपरोस् । फेरि कोही एक जनाले विवाह नगर्दैमा संसार पनि त रोकिँदैन । प्राकृतिक विकासक्रम पनि रोकिनेवाला छैन । पृथ्वीबाट मानव प्रजाति लोप हुनेवाला छैन । एक जनाले बिहे गर्नु र नगर्नुमा सारा अस्तित्वलाई केही फरक पर्नेवाला छैन । ४.५ अर्ब वर्षपछि मेरो बिहे होला भनेर ‘इभोल्युसन’ यहाँसम्म घिस्रीघिस्री आइपुगेको पनि होइन ।
म विवाह, सम्बन्ध र जिम्मेवारीदेखि भागेको देखेर मेरा विवाहित साथी र दिदीबहिनीहरू भनिरहन्छन्, ‘कति भाग्छेस् यार, अब त सेटल हो ।’
म उल्टै सोधिदिन्छु, ‘तिमीहरूलाई म कसरी अनसेटल्ड लाग्छ ?’
उनीहरू अक्क न बक्क भएर आँखा यताउता टहलाउन थाल्छन् । उनीहरूभित्र गडेको पितृसत्ता र सिस्टमले म यो समाजमा कतै अटाउन सकेकी छैन । तर, मलाई बाल !
केही दिनअघि एक जना साथीले फोन गर्‍यो । उसको घरमा बुबा, मम्मी र ऊ छन् । ऊ पढे–लेखेको, राम्रो पेसामा छ । तर, उसको कुराले मेरो पारा तात्यो ।
उसले भन्दै थियो, ‘मम्मीलाई सन्चो नै भएन ।’
मैले सोधें, ‘अनि खाना खान दियौ मम्मीलाई ?’
‘अहँ ! के पकाउनू र मैले ! कहाँ पकाउनू ! यस्तो बेलामा चाहिँ बिहे गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने रहेछ ।’
रिसको झोंकमा मैले उसलाई के भनें, अहिले सम्झना छैन । मनमनैचाहिँ ‘गो टु हेल’ भनेको धमिलो याद छ ।
भान्सा महिलाको जिम्मेवारी हो भनेर सोचिने संरचनामा अहिले थोरै भए पनि परिवर्तन आएको छ । तर, भान्सामा तरकारी काट्दैमा, लसुन फोकिदिँदैमा सबै कुरा सकिँदैन । भान्सामा सहयोग गरे पुग्छ भन्ने मानसिकता पनि सही होइन । बराबरी र लैंगिक समानताको सुरुआत भान्साबाट हुन सक्छ तर त्यत्तिले पुग्दैन । सुधारको बाटोमा भान्सा नर्सरी कक्षा मात्र हो ।
मेरो एकदम मिल्ने साथी सिड्नीमा बस्छे । उसका दुई छोरी छन् । ऊ छोरीहरूलाई हुर्काउने, पढाउनुका साथसाथै आफ्नो काम पनि गरिरहेकी छ । ऊ आफ्नो वैवाहिक जीवनसँग खुसी थिइनँ । खराब सम्बन्धले गर्दा मानसिक स्वास्थ्यमै असर पर्न थालिसकेको थियो । उसले छुट्टिने निर्णय गरी । त्यो निर्णय अस्ट्रेलियाबाट आँधीतुफानझैं काठमाडौं आइपुग्यो । उसको साथमा कोही उभिएनन् । ऊ परिवारबाट बहिष्कृत भई । अहिले एक्लै संघर्ष गरेर बसेकी छे ।
केही दिनअघि भनेकी थिई, ‘मलाई के–के नराम्रो सोच आयो । त्यसैले ठूली छोरीलाई पुलिसको नम्बर र एम्बुलेन्सको नम्बर कण्ठ पार्न लगाएँ । अनि मलाई केही भयो भने नडराई ती नम्बरमा फोन गर्न अह्राएँ ।’
विवाह तोड्ने निर्णय लिन उसलाई सजिलो थिएन । घरपरिवारसँग बोलचाल बन्द भयो । सम्बन्ध बिग्रियो । ऊ अझै आफूलाई कसरी सम्हालिरहेकी छे भनेर एकवचन कसैले सोधेका छैनन् । बाउले उसका लागि ढोका बन्द गरिसके । आमा चुपचाप छिन् । तर, पनि उसले हारेकी भने छैन ।
पुरुषले छोडेको भए उसलाई बहिष्कार गर्नु त परैको कुरा, उसको लागि दोस्रो श्रीमती खोज्ने तयारी नै चलिसकेको हुन्थ्यो । हाम्रो समाजमा महिलाले निर्णय लिएको कसैलाई पच्दैन । समाजले ‘महिलाको पखेटा पलाएको’ देख्न सक्दैन । उसका चाहना र स्वतन्त्रताले कुनै अर्थ राख्दैनन् । समाजकै लागि भए पनि महिलाले घुट्घुटिएर बाँचिदिनुपर्छ । तर, मेरी साथीले आफूलाई सोची । आफू खुसी भए छोरीहरूलाई खुसी राख्न सक्छु भन्ने ठानी र अघि बढी ।
कहिलेकाहीँ लाग्छ— जति बेला मन लाग्यो, उति बेला फुकाएर फाल्न पाइने भएकाले होला, महिलालाई परिवारका ‘गहना’ भनेको !
‘महिलाको दुश्मन महिला नै हो’ भनेर पितृसत्ता पन्छिन खोज्छ । ‘खराब सासू’, ‘खराब बुहारी’, ‘खराब नन्द–आमाजू’ आदिले नै हो महिलालाई अघि बढ्न नदिने भन्ने बुझाइ लाद्न खोजिन्छ । म मान्छु— सबै असल नहोलान् तर यस्ता पात्रहरू पितृसत्ताले प्रयोग गर्ने कवचमात्र हुन् । आफू चोखिन प्रयोग गर्ने पात्र । यदि सासू खराब देखिन्छिन् भने उनलाई पुस्तौंपुस्ताले त्यसो बन्न बाध्य बनाएको हो । हजुरआमालाई त्यतिबेलाको समाज र चलनले बाध्य बनाएको हुन सक्छ । हजुरआमाले गरेको देखेर आमा पनि बाध्य भइन् होला । आमालाई देखेर छोरी पनि त्यही बाटोमा लाग्छिन् होला । एउटा महिला अर्को महिलाको मित्र नहोलान् तर दुश्मन कुनै हालतमा होइनन् । दुश्मन यो समाजको पितृसत्ता नै हो ।
वंश अगाडि बढाउन विवाह जरुरी होला तर विवाह केवल समझदारीको भण्डार हो । कुण्ठा र तिरस्कारको भकारी हो । र, यो हाम्रो समाजमा मात्र सीमित छैन । हाम्रो धर्ममा मात्र सीमित छैन । भियतनामकी मेरी साथी भन्छे, ‘हाम्रो समाजमा महिलालाई धेरै गाह्रो छ । मेरो काका राजाजस्तो बनेर खान्छ । म त पढाइका लागि सहरमा बस्छु । गाउँमा सबै काम र सबै निर्णयमा पुरुषकै दबदबा छ । महिलाको काम पकाउने र घरको काम गर्ने मात्र हो ।’
मेरी एक जना नजिककी भाउजूलाई दाइले उति वास्ता गर्दैनन् । तर, भाउजूको चौतर्फी सकारात्मक चर्चा हुन्छ । बूढाले वास्ता नगरे पनि सबैलाई हाँसेर स्वागत गर्ने, घरमा आइपर्ने सबै जिम्मेवारी वहन गर्ने ‘कुशल बुहारी’ हुन् उनी ।
बूढी सासू बिरामी हुँदा बुहारी बनाएर भित्र्याइएको थियो उनलाई । उनले सासूको राम्रो हेरविचार गरिन् । सबैले तारिफ गरे । तर, जसका लागि सबै घरबार छोडेर आइन्, ऊ नै आफ्नो हो/होइन, थाहा भएन ।
‘बूढाले जस्तो व्यवहार गरे पनि आमाजू, फुपू, सासू, ससुरासँगै सिंगो खानदानलाई एक ढिक्का बनाएर राखेकी छे । लक्षिणकी रहिछ । घर धानेर बसेकी छे । कति उज्याली । यस्ती पो बुहारी !’
गुणगान उनले सधैं सुन्न पाइन् । तर, उनी भित्रभित्रै कति पिल्सिएकी छन्, उनलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन ।
कोही भन्छन्, ‘छोरी पाइहाली । बूढो कुरा परे राम्रोसँग बोलिहाल्छ । के गरोस् त, उसको बानी नै धेरै नबोल्नेछ ।’
भाउजूको बानी धेरै नबोल्ने भएको भए ? नहाँस्ने भएको भए ? भाउजूले दाइलाई वास्ता नगर्ने भएको भए ? घरको केही हेरविचार नगर्ने भएको भए ?
मैले धेरैपटक भन्छु, ‘भाउजू, छोड्न किन डराउनुहुन्छ ?’
‘कहाँ जाने म ? घरको हालत त्यस्तो छ । अब यही आफ्नो भाग्य सम्झेर बस्नुपर्छ,’ उनी एक सासमा भन्छिन्।
मलाई सबैले ‘भाउजू भड्काइस्’ भनेर गाली गर्छन् । तर, म जे देख्छु, त्यसले मेरो रगत उम्लिन्छ । फेसबुकमा अरूको एनिभर्सरी, जन्मदिनका फोटो हेरेर खिन्न मान्ने भाउजूलाई आफ्नो बिहेको फोटो कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन । भोलि छोरी ठूली भएर आमा र बुबालाई प्रश्न गरी भने ? ‘बिहेको फोटो हेर्छु नि’ भनी भने ?
यस्ता अरू पात्र पनि छन् । उनीहरूलाई देख्नेबित्तिकै म ‘भाँड्ने’ काम गर्छु । ‘बाँदरले आफ्नो घर नि बनाउँदैन, अरूको पनि बन्न दिँदैन’ भन्ने डायलग धेरैपटक खाइसकें । यस्ता सम्बन्ध र यस्ता पात्रहरूलाई म बाँचुन्जेल भाँडिरहन्छु ।
आफ्ना सासू, ससुरा, देवर, देवरानी सबैप्रतिका कुण्ठा पोखिसकेपछि फेरि उनीहरू नै भन्छन्, ‘माया त एकदम गर्नुहुन्छ श्रीमान्ले तर कहिलेकाहीँ कराउने बानी छ । म पनि त कराउँछु नि ! कसैको नेचर नै यस्तो हुन्छ, अब अलिअलि सम्झौता त गर्न परिहाल्यो नि !’
‘होइन, मेरो सासू मम्मी र बुबा त घरको आमा–बाबाभन्दा बढी माया गरिसिन्छ । कस्तो फ्रिडम दिसिन्छ । तर, आफैंलाई अप्ठ्यारो लाग्ने के, केही कुरा भन्नुपर्दा ! धेरै ढिलोसम्म घर नपुग्दा आफैंलाई कस्तो–कस्तो लाग्ने के !’
म आफ्नो जिन्दगी र स्वतन्त्रता बिर्सन चाहन्नँ । बिहे गर्ने रहर मलाई पनि छ । म पनि बच्चा जन्माउन चाहन्छु । म पनि आमा बन्न चाहन्छु । जिन्दगीमा पाइने हरेक अनुभव बटुल्न चाहन्छु । तर, आफ्नो स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठेर म कुनै घर सजाउन सक्दिनँ । आफ्ना खुसी र इच्छाहरू मारेर ठडिएको त्यस्तो घर मेरा लागि घर हुनेछैन ।
म सोच्छु— एकपटक पाएको जिन्दगी घुमेर, रमाएर, नयाँ ठाउँ र मानिस भेटेर बिताऊँ । मलाई कसैकी श्रीमती, बुहारी, नन्द–देवरकी भाउजू बनेर यो जीवन बिताउन मन छैन । मन भन्छ— जा घुम् । बाँच् आफ्नो जिन्दगी । बाँकी म सम्हाल्छु ।
त्यसैले म यो बाटोमा छु । यतिन्जेलसम्म हिँड्दा थुप्रै अपमान, तिरस्कार र अवहेलना भोग्नुपरेको छ । र, यो क्रम रोकिनेछैन । समाजले बिहे नगरेकाहरूलाई बहिष्कारको नजरले हेर्छ । समाजलाई मेरो खुसीबारे न कहिल्यै कुनै मतलब थियो न हुनेवाला नै छ । एउटी अविवाहित केटीलाई समाजमा अटाउनका लागि विवाहवाला परीक्षा पास गर्नुपर्छ भने म त्यस्ता हरेक परीक्षा बहिष्कार गर्छु । मलाई बाल !
मेरो एउटा ‘रेकरिङ ड्रिम’ छ— सबै जना तयार भएर बसेका । म पनि सजिएकी हुन्छु, बेहुली बनेर । तर, जन्तीको बाजा सुनेपछि मलाई एन्जाइटी सुरु हुन थाल्छ । रातो सारी, घुम्टो, मेकअप मलाई भारी लाग्छ । गहनाले मेरो घाँटी निमोठिएको जस्तो हुन्छ । जन्ती आइसकेको खबरले म झन् आत्तिन थाल्छु । के गरौं, कसो गरौं हुन्छ । म बसिरहेको ठाउँबाट उठ्न खोज्छु, सक्दिनँ । जब सबै जन्ती हेर्न गइरहेका हुन्छन्, म सबै छोडेर कता–कता अन्तै पुग्छु, यो समाजबाट धेरै टाढा । मनमा सन्तोष आउँछ । भित्रबाट मेरो आत्मा बोल्छ— कुनै हिन्दी सिनेमामा झैं— ‘यु डन्ट वान्ट दिस !’
प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७७ १९:१४